Fanontaniana&Valiny: Fantaro i Lami’ Tsai-Wei Hung, mpikatroka ho an’ny fiteny Sakizaya · Global Voices teny Malagasy
Lami' no hitantana ny kaonty @AsiaLangsOnline ny 15-21 Jolay 2020
Voadika ny 21 Jolay 2020 14:46 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Ελληνικά, Esperanto , Português, English
Taorian'ny kaonferansa momba ny faha-140 taonan'ny Tolon'ny Sakizaya Takubuwan sy yny Tolon'ny Kavalan Kaliwan, 2018, Hualian. Lami’ Tsai-Wei Hung (farany havanana) sy ireo Sakizaya nàmany (avy ankavanana miankavia) Hana Ateng, Sabak Nubu ary Dayas Siku. Sary natolotr'i Lami’ Tsai-Wei Hun.
Isankerinandro, ireo vahiny mpampiantrano ho avy eo dia hamaly fanontaniana maromaro momba ny làlana nodiaviny sy hanome topimaso fohy momba ny fitenin-dry zareo. Ity ny Fanontaniana sy Valiny niarahana tamin'i Lami’ Tsai-Wei Hung (@GomorrahCastle ) izay hanome topimaso momba izay horesahany mandritra ny herinandro maha-mpampiantrano azy.
Lami’ Tsai-Wei Hung (LTWH): Izaho no Lami’ Tsai-Wei Hung, mpianatra manomana PhD ao amin'ny Departemantan'ny Kolontsaina sy ny Fifandraisan'ny Foko, ao amin'ny Anjerimanontolom-panjakàna ao Dong Hwa, Taiwan. Niasa nandritra ny taona roa niaraka tamin'ireo vahoaka Sakizaya mba hanomezana aina vao indray ny fiteny Sakizaya, hampiroboroboana ny fampiasàna azy ary hanatsaràna ny sata misy azy.
Amin'ny maha-tafiditra azy ao anatin'ny Fandaharanasa “Sakizaya Mentor-Apprentice” (izay ny fikambanana mpanandratra ny fiteny Sakizaya no manetsiketsika azy, ary famatsiambola avy amin'ny Filankevitr'ireo Vahoaka Indizeny ao Taiwan), ny anjara asako dia mamorona hetsika fampiharana mba hampifandraisana ny olona amin'ilay fiteny. Mety ho hita ao anatin'io ny fandrafetana fandaharam-pampianarana, famokarana sarimihetsika, fandefasana vaovao ao amin'ny Facebook ary hatramin'ny fandraisana mpiasa hampitomboana ireo mpampiasa Wikipedia eny ifotony.
LTWH: Tamin'ny Janoary 2020 dia nahatratra 985 ny vondrompiarahamonina Sakizaya, sangy mety ho vitsy, 590, eo monja no tena mpiteny azy, satria tsy tonga lafatra ny fifampitàna teo amin'ireo andian-taranaka. Mety misy olona hiandrandra hoe maro ireo antipanahy Sakizaya efa mihoatra ny 55 taona no hiteny tsy miambakavaka ilay fiteny, saingy mety tsy ho izay ny zavamisy ho an'ireo tanora sy ireo mipetraka any an-tanandehibe.
Misy fantsom-pahitalavitra roa ao an-toerana (ny Taiwan Indigenous TV (TITV) sy ny FM96.3 Alian Radio), manapariaka amin'ny fiteny indizeny, samy azo raisina ety anaty aterineto avokoa ka isan'ireny ny Sakizaya. Kanefa, ireo mpitarika azy ireny dia efa ao anatin'ny faha-enimpolo taonany avokoa ka sahirana mitady izay fomba fandresena lahatra hanakaikezana ireo andiantaranaka tanora.
Nisy ireo ezaka nataon'ny fanjakàna mba hampiasàna ireo fiteny zanatany miaraka amin'ny Mandarin. Napetraka ireo politika sy famatsiambola fanampiny natodika ho amin'ireo fandaharanasa famelomana indray ny fiteny sy hanohanana bebe kokoa ireo fiteny zanatany ireo. Antenaina ireny fepetra ireny mba hahasintona bebe kokoa ny fahalinan'ny vahoaka.
Amin'ny resaka fanabeazana, misy “kilasy tsy maintsy atrehana” hianarana ireo tenindreny: misy isankerinandro ora iray omena ireo mpianatra rehetra mandrapahatongany any amin'ny taona faha-9. Takiana amin'ny sekoly ny hitadiavany mpampianatra hisahana ireo teny zanatany tanindonim-paharinganana, toy ny Sakizaya, araka ny fangatahan'ny mpianatra.
Raha ny toedraharaha voafaritra etoana, tsy ho atao mahagaga ny hoe zara raha misy ny fampiasàna ny fiteny Sakizaya ety anaty aterineto, afa-tsy ny an'ny tranonkala Wikipedia izay toerana itahirizanay ireo antontan-kevitra marobe momba ilay fiteny, hatramin'ny tantara sy ny kolontsainay.
LTWH: Vinavinanay ny hitondra lohahevitra fototra roa. Voalohany dia ho asongadinay ny fetibe fandratoana trondro karakarain'ny foko Saklul rehefa volana Jona. An-taona maro ny renirano, izay efa hatrizay no faritra fanaovana jono nentindrazana, no naripadripaka fahatany, ary amin'izao fotoana izao ireo vahoaka Sekul dia manomboka mitatatra / manalalina azy sy mametraka ireo fitaovana nentindrazany natao tànana ho entina manjono any amin'ny fanambanin'ny ony, andro iray mialoha ilay fetibe. Amin'io andro io, ireo lehilahy irery ihany no mahazo miroboka an-drano, ary ireo vehivavy mikarakara ny sakafo any an-dakozia, eo ampiandrasana ny fizaràna ny vokatra amin'ny olona rehetra.
Ny lohahevitra faharoa dia momba ny famerenana ireo fitafy nentindrazana ao amin'ny foko Kaluluwan. Raha ny marina, io fitafy Sakizaya amin'izao fotoana io dia noforonina / hita 20 taona lasa izay mba ho fampiroboroboana ny firaisankinan'ireo olona Sakizaya. Kanefa, ireo foko na fianakaviana tsirairay dia mety manana ny fitafiny manokana efa nandia taranaka maro nifandimby. Hotopazanay maso ireo fomba fitafy ao amin'ny foko Kaluluwan.
Fanampin'izay, hamoaka ihany koa aho fampahafantarana ety anaty tambajotra sôsialy, hanasàna ireo mpandray anjara. Araka izany, manantena fampidirana roa na telo avy amin'ireo olona ivelan'ireo mpiaramiasa aho mba hampiditra singa hafa ara-kolontsaina mahakasika ny fiainana andavanandro, toy ny voly malaza fanaon'ny razana.
RV:Inona no tena antony manosika anao ho amin'ny fikatrohana an-tserasera ho an'ny fiteninao? Inona no fanantenanao sy nofinofinao ho an'ny fiteninao?
LTWH: Mamelà ahy handika sy hamerina hamaritra ny valinteny nomen'i Padakaw Lami’, tanora Sakizaya iray mpianatra :
“Azon'ny fikatrohana nomerika atao ny miaro sy mitahiry amin'ny fomba matanjaka ireo antontan-kevitra momba ny fiteny. Etsy ankilany, hamorain'io ny fahafahan'ny zavatra soratako sy lazaiko mba ho tonga any amin'ireo olona mety ho liana aminy, tsy mampaninona na iza izy na iza. Ny fahazoana domberina sy fahafantarana hoe ankafizin'ny hafa ny fiteniko sy ny ezaka nataoko dia mitazona ahy hazoto sy havitrika.
Ny tena andrandraiko dia ny andro hoe ahafahan'ny tanora miteny azy io tsy miambakavaka rehefa mitafa amin'ireo Sakizaya zokiolona, izay midika fa nahazo aina vao ny fiteninay. Ny fanantenako manokana dia indray andro any mba ho afaka mitafa mivantana amin'ireo zokiolona ao anatin'ny fianakaviako, tsy miahankahana.”